Waa maxay muhimada uu leeyahay heshiiskii ay Jabuuti ku saxiixeen Somaliland iyo Somalia? (Falanqeyn)
Madaxweynaha Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa waxa ay December 21, 2014 ku kulmeen Magaalada Djibouti ee caasimada dalka Djibouti waxa ayna saxiixeen heshiis ka kooban dhowr qodob oo badanood ahaa kuwa ku jiray heshiisya hore.
Qodobka 1-aad ee hesiiska ayaa waxa uu yahay “In la dardar geliyo wadahadalada labada dhinac waqtina lagu jaangooyo” iyada oo qodobka labaad ee heshiisku leeyahay, “Labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in arimaha siyaasada ee masiiriga ah lagu dhiirado lana fuliyo waxyaabihii hore loogu heshiiyay oo kala ah”
a) In laga dhowrsado wixii wadahadalada carqalad gelin kara
b) In aan la siyaasadeyn deeqaha Aadanimo iyo mashaariicda dib u dhiska, walibana la dhiirri geliyo
c) In la fuliyo heshiiskii hawada iyada oo farsamo lagu saleynayo wixii lagu heshiiyay.
3) labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in wadahadalada laga qeyb geliyo dowlada Djibouti marka loo baahdo.
4) labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen ilaalinta xuquuqul-insaanka, iskaashiga nabad-gelyada iyo in meel looga soo wada jeesto ladagaalanka argagaxisada, burcad badeeda iyo denbiyada abaabulan.
5) in madasha tan ku xigta ee ay ku kulmayaan ergooyinka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland ay noqoto 26-27 February 2015 laguna qabto magaalada Istanbul ee dalka Turkiga
6) Waxa ay labada madaxweyne u mahadceliyeen madaxweynaha Jamhuuriyada Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle kaa oo marti geliyay wadahadaladaan kadib markii ay ka codsadeen labada dhinac.
Ahmiyada ay leeyihiin qodoba lagu heshiiyay
Inta badan Qodobada heshiiska ay ku gaareen Xassan Sheekh iyo Siilaanyo ayaa ah kuwa soo noqnoqday oo sidaan oo kale horay loogu saxiixay shirar ka dhacay Turkiga.
Muhiimadii loo soo bilaabay wadahadaladaan muda sanado laga joogo oo aheyd in Soomaalidu midoowdo labada dhinacba waa iska ilaaliyaan in ay soo hadal-qaadaan arintaas oo hor-seedi kartay in guul la gaaro ama la guul dareesto.
Maamulka Somaliland waxa ay shaaciyeen in ka goosteen Soomaali inteeda kale bilaawgii 1990-kii iyaga oo gucanaya dhacdooyin dhowr ah oo ay ugu weyneed Diyaaradihii duqeeyay Hargeysa xilligii dowladii kacaanka iyo awood qeybsigii koofur iyo waqooyi oo aan loo fulin sidii ku talagalku ahaa.
Iyada oo ay muhiimad gaar ah u leedahay Soomaalida oo dhan in lamidoobo, taa bedelkeedana aysan wax dan ah ku jirin in deegaanada Somaliland ay gaar u go’aan ayaa hadana siyaasiyiin Somaliland kasoo jeeda waxa ay hurinayaan dhaq-dhaqaaqyada gooni u goosadka ah iyaga oo koofurta u arka mid dhib ku heysa, gaar ahaan awood qeybsiga oo lagu takri falay.
Gabagabadii, dadka falanqeeya siyaasada waxa ay sheegayaan in gabi ahaanba qodobada lagu heshiiyay aysan laheyn wax ahmiyad ah, maadaama ay u muuqaal egyihiin filim horay loo daawaday oo ku celis ah, aanna loo gudbin marna bar-tilmaameedka oo ahaa in laga hadlo sidii Soomaalida mar labaad loo mideyn lahaa.
W/Q: Cabdi Fitaax Xaashi Nuur